काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय सदस्यहरुले सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीसँग तत्काल वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेकपाका सचिवालय सदस्यहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले तत्काल वार्ताको पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
“सरकारले डा. केसीसँग तत्काल वार्ता गरेर समस्याको समाधान गरोस् भनेर हामीले भन्यौं,” नेता खनालले बाह्रखरीसँग भने, “सरकारले नै रेस्पोन्स लिनुपर्छ । तत्काल वार्ता गरेर समस्याको समाधान सरकारले नै निकाल्नुपर्छ ।” नेता श्रेष्ठले पनि तत्काल वार्ताको पहल थाल्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले वार्ताको प्रयास जारी राखेको भन्दै कतिपय मागहरु पूरा भइसकेको बताएका थिए ।
“सचिवलाई पठाएको छु,” प्रधानमन्त्रीको जवाफ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, “केही मागहरु पूरा भइसकेका छन् । अहिले अनसन अन्त्य गर्नुपर्यो भनेका छौं, त्यसपछि पनि मागहरु पूरा गर्न सकिन्छ ।” बैठकपछि प्रवक्तासमेत रहेका नेता श्रेष्ठले डा. केसीका कतिपय विषयहरु कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेकाले अहिले अनसन बस्नु उपयुक्त समय नभएको बताएका थिए ।
उनले सचिवालय बैठकले डा. केसीलाई अनसन अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको बताए ।
काठमाडौँ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारका आरोपित तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा... २ मिनेट पहिले
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा एमालेको अर्को पक्ष खनाल–नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको छ झापाको बिर्तामोडमा... ३ मिनेट पहिले
काठमाडौं । पछिल्लो साता बाँकेको नेपालगञ्जमा क्षेत्रमा कोभिड १९ संक्रमितको तथ्यांक उच्च देखिएको छ । बिहीबारसम्म संकलन गरिएका नमूनामध्ये भेरी अस्पतालमा... ६ मिनेट पहिले
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सभा बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । दलका तर्फबाट नेताहरुले बोलिसकेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले... १३ मिनेट पहिले
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आफ्नो पार्टीका सांसदहरुको चरित्र हत्या नगर्न आग्रह गरेका छन्... १४ मिनेट पहिले
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राजनीतिक भविष्यका विषयमा विशेष खुलासा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा... ४८ मिनेट पहिले